Indlela Abakhangisi Be-imeyili Abasebenzisa Ngayo Izibalo Eziqagelayo Ukuze Bathuthukise Imiphumela Yabo Ye-Ecommerce | Martech Zone
Indlela Abakhangisi Be-imeyili Abasebenzisa Ngayo Izibalo Eziqagelayo Ukuze Bathuthukise Imiphumela Yabo Ye-Ecommerce
ULwesihlanu, February 25, 2022 ULwesihlanu, February 25, 2022 Prasanna Chitanand
Ukuvela kwe i-analytics yokubikezela ekukhangiseni nge-imeyili sekudumile, ikakhulukazi embonini ye-ecommerce. Ukusebenzisa ubuchwepheshe bokubikezela bokumaketha kunamandla okuthuthukisa ukukhomba, isikhathi, futhi ekugcineni kuguqule amabhizinisi amaningi nge-imeyili. Lobu buchwepheshe budlala indima ebalulekile ekuhlonzeni ukuthi yimiphi imikhiqizo amakhasimende akho angase ayithenge, uma kungenzeka athenge, kanye nokuqukethwe komuntu siqu okuzoqhuba umsebenzi.
Ukuqagela marketing isu elisebenzisa idatha yokuziphatha yesikhathi esidlule ukuze ibikezele ngokwezibalo ukuziphatha kwesikhathi esizayo. Idatha, ukuhlaziya, namasu okulinganisa okubikezela asetshenziselwa ukunquma ukuthi yiziphi izenzo zokumaketha okungenzeka ziguqulwe ngokusekelwe kumaphrofayili nokuziphatha kwekhasimende. Leyo datha idlala indima ebalulekile ekwenzeni izinqumo ezihlakaniphile. Uma esetshenziswa ekukhangiseni nge-imeyili, ama-algorithms angakusiza ukuthi uqondise izethameli ezifanele, uthuthukise ukusebenzelana, ukhiqize ukuguqulwa okwengeziwe, futhi ukhiqize imali engenayo eyengeziwe ngemikhankaso ye-imeyili.
Yini i-Predictive Analytics?
Ukuqagela analytics kuyinqubo egxile kudatha esetshenziswa abakhangisi ukuze baqonde ukusebenzisana kwamakhasimende emikhankasweni edlule nomsebenzi wesayithi ongabikezela ukuziphatha kwesikhathi esizayo. Izibalo zokuqagela ziwusizo ekudaleni imikhankaso yokuthengisa eqondene nawe futhi efanele. Ngoba imeyili marketing ochwepheshe, amaphuzu edatha abikezelayo ahlinzeka ngemininingwane namathuba okuziphatha kwamakhasimende afana nalokhu:
Amathuba okushintsha noma ukuzikhipha ohlwini
Isikhathi esilungile sokuthenga
Imikhiqizo efanele noma izigaba zomkhiqizo
Lilonke inani lesikhathi sempilo yekhasimende (I-CLV)
Le datha ingakusiza ukuthi usebenzise amasu, izimo zokuhlola, noma wenze ngokuzenzakalela ukuthunyelwa komlayezo ofanele ngesikhathi esifanele. Nazi izibikezelo ezingaba usizo ukuthuthukisa umlayezo, nokulinganisa ukusebenza kwe-imeyili kukonke.
Inhloso yokuthenga - Ukuqonda ukuthi isivakashi singathenga kangakanani kungakusiza ukuthi uqhubeke nokuletha okuqukethwe okufanele kumlayezo wakho. Izivakashi ezinezinga eliphezulu lentshisekelo zingase ziguqule, futhi ukulondoloza izaphulelo zakho kwabathintwayo abanjalo kuzokhuphula i-LTV.
Idethi ebikezelwe yokuthenga okuzayo - I-Mid-range kanye nama-ESP athuthuke kakhulu anekhono lokuhlanganisa imikhuba yokuthenga yokuxhumana futhi alindele ukuthi angase afake nini i-oda lawo elizayo, okukwenza ukwazi ukuletha ngokuzenzakalelayo i-imeyili enemikhiqizo enconyiwe ngesikhathi esifanele.
Umkhiqizo oyintandokazi noma isigaba somkhiqizo - Ukuhlonza umkhiqizo noma isigaba somkhiqizo esithandwa kakhulu yiwo wonke umsebenzisi kukuvumela ukuthi ukhiqize kangcono ama-imeyili akho ngomkhiqizo othandwa yibona.
Inani lokuphila kwekhasimende elilindelwe (I-CLmV) - Ngokubheka inani elingokomlando lekhasimende, imvamisa yokuthenga lalo, kanye nosuku okulindelekile lokuthenga kabusha, inani elibikezelwe lokuphila lingakhiqizwa. Lokhu kuhlaziya kukusiza ukuthi uqonde ukuthi ubani phakathi kwamakhasimende akho othembeke kakhulu noma okungenzeka ukuthi amguqule ngevelu ye-oda eliphakathi nendawo (I-AOV).
Ukusebenzisa izibalo zokubikezela emkhankasweni wakho wokumaketha we-imeyili kuzokwenza imikhankaso yakho ibukeke yomuntu siqu, ifaneleka, futhi ifike ngesikhathi - kuthuthukisa imali yakho engenayo.
I-Predictive Analytics Izuza Kanjani I-Momentum?
Kokubili imakethe yokuhlaziya enqunyiwe nebikezelayo yayimi ku-USD 10.01 million ngo-2020 futhi kubikezelwa ukuthi izothinta u-$35.45 billion ngo-2027, futhi ikhule ngezinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe (I-CAGR) ka-21.9% phakathi kuka-2020 kuya ku-2027.
Izibalo Zemakethe Yezibalo Eziqagelayo: 2027
Kukhona izinto ezimbalwa eziqhubekisela phambili ukuduma kwezibalo eziqagelayo.
Ubuchwepheshe besitoreji abubizi futhi buyakala, buvumela ikhono lokuthwebula nokuhlaziya ngokushesha ama-terabytes edatha.
Isivinini sokucubungula nokwabiwa kwenkumbulo kumaseva nakumaseva abonakalayo (kuwo wonke amaseva) kunikeza amathuba okusebenzisa izingxenyekazi zekhompuyutha ukusebenzisa cishe izimo ezingenamkhawulo zokubikezela idatha.
Amapulatifomu ahlanganisa lawa mathuluzi ngezinga elikhulu futhi enze ubuchwepheshe bube lula futhi bufinyeleleke ebhizinisini elimaphakathi.
Konke lokhu okungenhla kunikeza ukuphakama okubalulekile emiphumeleni yomkhankaso wokumaketha, okuholela ekubuyeni okusheshayo ekutshalweni kwezobuchwepheshe (I-ROTI).
Ukusetshenziswa kwe-Predictive Analytics ekukhangiseni nge-imeyili
Uma kuziwa ekukhangiseni nge-imeyili, izibalo eziqagelayo zisekela umhlinzeki wesevisi ye-imeyili yenhlangano futhi ihlanganisa ukuqashelwa kokuziphatha kwesikhathi sangempela nedatha yekhasimende yangaphambilini ukuze kudalwe kokubili imikhankaso ye-imeyili ezenzakalelayo neyenzelwe umuntu siqu. Inzuzo yayo eyengeziwe ukuthi iyasiza kusukela ekutholeni nasekuthuthukiseni ubudlelwano kuye ekugcineni kwamakhasimende kanye nemikhankaso ye-imeyili yokuwina.
Nazi izindlela ezi-4 zezibalo eziqagelayo ezithuthukisa amasu akho omkhankaso we-imeyili:
Ukuthola amakhasimende amasha - Kuwo wonke amanye ama-mediums, ithuba lokuphrofayili nokukhomba izethameli ezibukeka ngendlela efanayo kuyindlela ekahle yokuthengisa kulabo abazoba amakhasimende. Iningi lezinjini zokukhangisa zinamandla okungenisa amakheli e-imeyili ukuze kuphrofayili abasebenzisi bakho ngokwendawo, ngokwendawo, ngisho nangokususelwe kuzintshisekelo zabo. Bese, leyo phrofayili (noma amaphrofayili) ingasetshenziselwa ukukhangisa kulabo abazoba amakhasimende ngokunikezwa kokubhalisela ukumaketha kwakho kwe-imeyili.
Ukwandisa ukuguqulwa - Uma okungenzeka amakhasimende eba ababhalisile bokuqala ukuthola i-imeyili yokuphromotha evela enkampanini, ngokuvamile athola uchungechunge lwe-imeyili lokwamukela ebhokisini labo lokungenayo. Inhloso yawo wukubakhuthaza ukuthi bathenge umkhiqizo. Ngokufanayo, amathemba amasha athola ama-imeyili anjalo, futhi ngezinye izikhathi ukunikezwa kokuphromotha kwekhwalithi. Ngokusebenzisa izibalo eziqagelayo kukho kokubili idatha yokubala yabantu, neyokuziphatha, ungahlukanisa abangaba amakhasimende - ukuhlola imilayezo eminingi, nokunikezwayo - ukuze udale ama-imeyili afundisayo, abalulekile, naqondene nawe uthuthukise ukuguqulwa, futhi ungenise imali.
Ukwakha ubudlelwano bokugcinwa kwamakhasimende - Izibalo eziqagelayo zingasebenzisa izinketho zezincomo zomkhiqizo zokuzibandakanya kwamakhasimende, nokugcinwa. Le datha ingakusiza ukuthi uqondise amakhasimende alungile athenge ngaphambilini imikhiqizo yakho noma ayiphequlule kuwebhusayithi yakho. Ukwengeza imininingwane ehlukahlukene njengobudala, ubulili, inani le-oda, indawo, njll. Kungenzeka ukuhlonza ukuthi hlobo luni lwemikhiqizo abangathanda ukuyithenga ngokuzayo. Ngale datha, uthumela okuqukethwe kwe-imeyili kanye neminikelo kumathemba angawodwana. Izibalo eziqagelayo nazo ziwusizo ekunqumeni ukuthi amakhasimende athenga kaningi kangakanani, ungaqonda imvamisa ephelele yokuthumela ama-imeyili akho ahlobene nomkhiqizo kubo.
Isu lokubuyisela emuva kwekhasimende – Ukuthumela a siyakukhumbula umyalezo ku-imeyili kuwo wonke amakhasimende ngemva kwesikhathi esithile kusukela agcina ukuthenga umkhiqizo. Ngosizo lwezibalo ezibikezelayo, ungakha ama-imeyili okubuyisela emuva komuntu siqu, futhi uthole isikhawu sesikhathi esingcono kakhulu sokubathumelela ama-imeyili, futhi unikeze izaphulelo ezithile noma izikhuthazo zokuzibandakanya kabusha.
Ukumaketha okuqagelayo kuyisikhali esinamandla sabakhangisi ukuze baqonde izethameli abazihlosile futhi zibasize basebenzise isu elinamandla emikhankasweni yabo yokumaketha nge-imeyili. Ngalokhu, ungahlaba umxhwele ababhalisile bakho, futhi ubaguqule babe amakhasimende athembekile, okuholela ekugcineni ekwandeni kokuthengisa.
Tags: ukuthenga inhlosochurnizinga lokuguqulwainani lempilo yekhasimendei-winback yekhasimendeezokuhweba ngekhompyuthaimeyiliimeyili Marketingababukeli abafanayookuqukethwe okwenziwe ngezifisoi-analytics yokubikezelaukumaketha kwe-imeyili okubikezelayoukumaketha okubikezelayoizincomo zomkhiqizousuku lokuthengaukutholwa kobhalisileukutholwa kobhalisileukubhalisa kwababhalisile
Asebenza Kanjani Amapharamitha e-UTM Ku-imeyili Ngemikhankaso ye-Google Analytics?
Umhlahlandlela Wokuthola Kalula Ama-Backlink kanye Nezinga Ku-Google Usebenzisa i-AI